Raajo - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Guriga Fumax SMT wuxuu ku qalabeeyay Mashiinka X-Ray si loo hubiyo qaybaha la iibinayo sida BGA, QFN… iwm
Raajo ayaa adeegsata raajada tamarta yar si ay dhaqso ugu ogaato walxaha iyadoon waxyeello u geysan.
1. Kala duwanaanta arjiga:
IC, BGA, PCB / PCBA, baaritaanka iibka iibka ee dusha sare, iwm.
3. Waxqabadka raajada:
Waxay isticmaashaa bartilmaameedyada saameynta korantada sare si loo soo saaro X-Ray si loo tijaabiyo tayada qaabdhismeedka gudaha ee qaybaha elektaroonigga ah, alaabada baakadaha semiconductor, iyo tayada noocyada kala duwan ee kalagoysyada alxan ee SMT.
4. Maxaa la ogaan karaa:
Qalabka birta iyo qaybo ka mid ah, qalabka caaga ah iyo qaybo ka mid ah, qaybaha elektaroonigga ah, qaybaha elektarooniga ah, qaybaha LED-ka iyo dildilaaca kale ee gudaha, ogaanshaha cillad shisheeye, BGA, guddiga wareegga iyo falanqaynta kale ee barakaca gudaha; cadee alxanka madhan, alxanka dalwaddii iyo Cilladaha kale ee alxanka BGA, nidaamyada microelectronic iyo qeybaha ku dhagan, fiilooyinka, qalabka, falanqaynta gudaha ee qaybaha balaastigga ah.
5. Muhiimadda raajada:
Tikniyoolajiyada kormeerka X-RAY waxay keentay isbeddello cusub hababka kormeerka wax soo saarka SMT. Waxaa la oran karaa in X-Ray uu hadda yahay xulashada ugu caansan ee soosaarayaasha kuwaas oo u hanqal taagaya inay sii horumariyaan heerka wax soo saarka ee SMT, hagaajinta tayada wax soosaarka, waxayna kaheli doonaan shilalka isku imaatinka wareega ee waqtigooda sidii horumar. Iyada oo isbeddelka horumarka lagu jiro SMT, qaababka kale ee baaritaanka cilladda golaha ayaa adag in la hirgeliyo xaddidooda darteed. Qalabka ogaanshaha tooska ah ee loo yaqaan 'X-RAY' wuxuu noqonayaa diiradda cusub ee qalabka wax soo saarka SMT wuxuuna door muhiim ah ka ciyaarayaa wax soo saarka SMT.
6. Faa'iidada raajada:
(1) Waxay baari kartaa 97% caymiska cilladaha geeddi-socodka, oo ay kujiraan laakiin aan kuxaddidnayn: iibinta beenta ah, buundada, taallada, Alxan aan kufilanayn, afuufka, waxyaabaha maqan, iwm. Gaar ahaan, X-RAY waxay kaloo baari kartaa qalabka qarsoon ee wadajirka sida BGA iyo CSP. Waxaa intaa dheer, SMT X-Ray wuxuu baari karaa isha qaawan iyo meelaha aan lagu baari karin tijaabada internetka. Tusaale ahaan, markii PCBA lagu xukumo inuu khaldanyahay lagana shaki qabo in lakabka gudaha ee PCB uu jabay, X-RAY si dhakhso leh ayuu u hubin karaa.
(2) Waqtiga diyaarinta imtixaanka si weyn ayaa loo dhimay.
(3) Cilladaha aan lagu kalsoonaan karin lagu ogaan karo habab kale oo tijaabooyin ah waa la arki karaa, sida: alxanka beenta ah, godadka hawada, wax qaabeynta liita, iwm.
(4) Hal mar oo kormeer ah ayaa loo baahan yahay si loox laba-geesood ah iyo looxyo badan oo isku dhafan hal mar (oo leh hawl isku dhafan)
(5) Macluumaadka cabbirka ee khuseeya ayaa la bixin karaa si loo qiimeeyo habka wax soo saarka ee SMT. Sida dhumucda Jinka Alxan, xaddiga Alxanle ee ka hooseeya wadajirka Alxan, iwm.